Chizvarwa chechipfumbamwe chemitambo chiri pano. Iyo PS5 uye Xbox Series X ndidzo mbiri dzakasimba dzimba dzekunyaradza dzakamboitwa, asi ndeipi sisitimu yakakunakira iwe? Ndo izvo zvatiri kutarisira kuti iwe uchaona nekupera kweiyi PS5 vs Xbox Series X kuenzanisa.
Isu takatonga iyo PlayStation 5 uye iyo Xbox Series X zvakasiyana mune kwedu kwakadzama ongororo. Kana iwe uchida kuzara kuzere kwechero koni, tarisa zvinongedzo pazasi. Asi ikozvino yave nguva yekuratidzira kukuru pakati peSony neMicrosoft new hardware. Kune imwe koni ine simba kupfuura imwe? Ndeipi console ine mitambo yakanakisa? Ndeipi iyo yakanyanya kukosha kukosha kwemari? Ngatinyurirei mukati.
Mitemo yedu: Sony PlayStation 5 ongororo | Xbox Series X kuongorora
Nezve izvi PS5 vs Xbox Series X kuenzanisa: Ndanga ndichiyedza iyo PS5 uye Xbox Series X kubvira kuvhurwa kweEuropean kwese kunyaradzwa pakati paNovember. Nezvinangwa zvechinyorwa chino, ini ndichave ndichireva kune yakajairwa PlayStation 5 iyo inouya ne disc disc. Nekuda kweakafanana maficha, maficha, uye mashandiro, ese ekufananidza pano anoshandawo kune isina disc-isina PS5 Dhijitari Edition kunze kwekunge zvataurwa.
Chikwereti: Oliver Cragg / Android Chiremera
Sony uye Microsoft yekunyaradza inogovana akawanda maitiro, kunyanya pasi pehodhi. Nekudaro, iko kutaridzika kwese kwemuchina wega wega hakugone kuve kwakasiyana.
Iko iyo PS5 inopfura panache yekutenda kune yayo yakajeka chena, sci-fi-senge yekushongedza, iyo Xbox Series X iri nyore, chunky, nhema cuboid. Iyo Xbox Series X inoratidzira padiki padiki ine yayo yakasvibira-inogadzirwa convex vent kumusoro, asi iyo PS5's curvy chassis iri zvose flair. Iyo "mapapiro" ePS5 anokwanisa zvakare kubviswa, saka tarisira kuona epamutemo anoshandurika mativi epaneru kubva kwaSony munguva pfupi.
Sony uye Microsoft dhizaini zvikwata zvaenda munzira mbiri dzakasiyana.
Hunhu humwe hwavanogovana ndohwekuti ivo hunhu husina kusimba hwevaraidzo setups. Kunze kwekunge iwe uine unit ine mahombe mahombe, iyo Xbox's girth uye kukwirisa kwePS5 zvinoreva kuti kanenge kamwe chete kanenge kakamira kusvina kana kukaiswa kwakatwasuka. Iyo PS5 ingangoita inokwana mukabati rangu, asi iyo chubby Series X haina-kutanga.
Izvo zvakati, ese masisitimu anotaridzika zvisina musoro kuseka kana akaiswa kudivi ravo. Iyo Series X inoita kunge yadonha pamusoro uye yakatwasuka PS5 inongotarisa, zvakanaka… zvisizvo. Ivo vanofanirwa kumira vakadada, kunyanya kana iwe uchida kuve nechokwadi chakanyanya kupisa kupararira.
Nepo fan fan dzingangodaro dzisingazosimukire kudzamara kwakawanda gare gare mune ehupenyu hweconsoles, pakuvhura ese ari maviri akanyarara sekuzevezera kana uchimhanya. Iyo isiri-yedhijitari PS5 modhi inokwidza kukakavara kana iwe ukaisa disc, asi inongotora masekondi mashoma.
Kusvika pakuenda kuzviteshi, iwo maviri akafanana akafanana. Uri kuwana simba, ethernet, mbiri USB-A 3.2, uye HDMI kunze kwezviteshi kumashure. Kumberi, iwe unowana imwe USB-A chiteshi, 4K Blu-ray disc drive, uye simba uye buritsa mabhatani. Kana koni inoratidzira odhiyo yekumeso kana HDMI muchiteshi.
Misiyano miviri inozivikanwa inouya neyakawedzera yekuwedzera USB-C chiteshi kumberi kwePS5 (yakakwana kugadzirisa recharge) uye yekuwedzera yekuwedzera slot kumashure kweiyo Series X. Yekupedzisira inotora makadhi eSDD etsika. Iyi inzira inokurumidza uye yakapusa yekuwedzera zvimwe zvekuchengetedza.
Iyo PS5 haitsigire inokwenenzverwa yekuchengetedza SSD pakuvhurwa, asi iwe pakupedzisira unozogona kukwidziridza neyakagamuchirwa Sony-M2 SSD. Izvi zvinoda kubvisa zvinowoneka zvemukati mapaneru uye kusunungura pekuchengetedza bay. Mhinduro yeMicrosoft yakanyanya kunaka mukuita.
Ose ma consoles anotsigira kuwedzera kweSSD, asi mhinduro ye Series X yakanyanya kunaka.
Imwe poindi inoendawo kuMicrosoft yekuwedzera mamaki ekumusoro kushure kweconsole. Vanokutendera kuti unzwe kunze kwakakodzera madoko usingavaone - nhanho huru kumberi kwekuwanika. Saizvozvo, iyo Xbox Series X yekutanga setup inoitwa chidimbu nyore neiyo Xbox app. Izvi zvinorega iwe uchitaipa mune ese ako account nhoroondo uchishandisa smartphone skrini pane pane mutongi, izvo zviri zvishoma zvakanyanya kunetsa. Tora zvinyorwa, Sony.
Ini pachangu, ini ndinoda ese magadzirirwo kunyangwe iwo akasarudzika akasarudzika kutaridzika - kunyanya nekuti ivo vanokodzera zvakakwana ethos yekodhi yega yega, asi zvimwe pane izvo gare gare.
Iko kusiyanisa dhizaini ethos yePS5 uye Xbox Series X inosvika kune vanodzora. Nepo iyo Xbox Wireless Controller uye iyo DualSense Wireless Controller iri kushanda zvakafanana, Sony akaona chizvarwa chitsva semukana wekufunga zvakare kuti mutambo wemutambo ungasimudzira sei mutambo.
Ngatitangei nezvinokosha. Vaviri vatongi vane zvigunwe zviviri, mabhatani mana emeso (kuenderera kwemaumbirwo vs mavara ekurwira ukuru), uye 3.5mm headphone jack. Iyo D-mapadhi akasiyana zvishoma. Iyo DualSense inokamura kupatsanura ina-bhatani pad uye iyo Xbox controller inorongedza yakasanganiswa D-pad ine muchinjikwa pateni uye yakatenderedzwa diagonals. Ndinosarudza kunzwa kweXbox D-pad, asi kudzvanya kukuru kwainoita kunogona kukanganisa. Vaviri vatongi zvakare vane maviri mabumpers uye maviri anokonzeresa, pamwe neepamusoro-yakakwira USB-C chiteshi.
Onawo: Iyo yakanakisa Xbox Series X zvishongedzo | Iyo yakanakisa PlayStation 5 zvishongedzo
Kana zviri zvetsika mabhatani, iyo DualSense inoratidzira yakatangira - iyo DualShock 4. Iyo inopa PlayStation bhatani, bhatani rekugovana (ikozvino tad nekunyepedzera inonzi "Gadzira") yekutora skrini uye vhidhiyo, uye bhatani resarudzo. Kune zvakare iyo touchpad iyo inogona kuita semamwe mabhatani ekuwedzera nekudzvanya chero divi. Nekudaro, iri kunyanya iripo yemitambo inobata-bata. Inovhenekera zvakare kutenderedza mativi. Inonakidza kwazvo.
Zvichakadaro, iyo Xbox controller inozopedzisira yawedzera yayo yega yekugovana bhatani mukuwedzera kune yakajairwa Xbox, Menyu, uye Tarisa mabhatani kumberi. Kune zvakare chiteshi chekuwedzera pazasi pezvishongedzo. Izvi zvinosanganisira sarudzo Tamba uye Charge Kit, nekuti hongu, iyo Series X gamepad inotora AA mabhatiri. Unogona kusabvumirana, asi ini ndinotora rechargeable pombi yemutambo pamusoro pekutsiva mabhatiri kana kuti kutenga recharging chishongedzo chero zuva.
Pane misiyano isinganzwisisike pakati pezviviri kusvika kune ergonomics kuenda. Iyo Xbox controller ine inorema mameseji mhedzisiro kutenderedza kumashure uye zvinokonzeresa. Iyo DualSense inoteedzera nzira iyi, asi haina kunyatso kuoneka muruoko. Saizvozvo, iyo DualSense anonzwa yakafara nekuda kweiyo ingangoita boomerang-senge kuvaka. Iyo Xbox pad, kune rimwe divi, inoenderana uye yakaoma neayo angles.
Nekudaro, pane zvimwe zvinozivikanwa zvinokwidziridzwa izvo iyo PS5 pad inozvirumbidza kana ichienzaniswa neiyo Xbox controller. Izvi zvinosanganisira DualShock 4 carryovers senge gyroscope yekutenderera inofamba, mutauri wakavakirwa-mukati uye mic, uye iyo yakambotaurwa touchpad. Asi, izvi zvese zvakacheneruka kana tichienzanisa nemikana miviri mikuru: iyo yepamusoro haptics uye inokonzeresa zvinokonzeresa.
Kune mumwe chete mutongi ari kunyatsosundira mutambo kumberi.
Taura zvakapusa, iyo DualSense's haptics mashiripiti. Mumwe wevandaishanda navo yatove waxed pamusoro pavo, uye ndinodzokorora manzwiro ake zvachose. Chaizvoizvo kunzwa iyo simbi yesimbi apo bakatwa rako rinobvaruka kubva kunhovo muMweya yeMadhimoni harimbochembere. Zvave kure kupfuura tsika dzechinyakare zvekuti unogona kusiyanisa pakati pekufamba pajecha, girazi, uye dzimwe nzvimbo muAstro's Playroom. Chinyorwa chipfupi, chemahara chinouya nePS5 yega yega iyo ingangoita tech demo yezvinhu zvakanakisa zveDualSense. Kutaura nezvazvo, izvo zvinogadzirisa zvinokonzeresa zvakaenzana. Izvi zvinogona kupokana nemunwe wako kudhonzwa zvichibva pane zvinoitika chiitiko pane iyo skrini, ichiwedzera kukwidziridza kunyudza kwako.
Zvichava zvinonakidza kuona (uye kunzwa) mashandisiro anoita Sony-yekutanga-pati studio kutora mukana weiyo DualSense's quirks. Nekudaro, hapana vimbiso yekuti hombe yechitatu-bato vagadziri vachatora zvakanyanya. Semuenzaniso, rumble muAsassin's Creed: Valhalla iri padyo-yakafanana kune ese ari maviri maPS5 uye Series X.
Iyo Series X controller haina kushata. Muchokwadi, inovaka pane apfuura Xbox controllers chaizvo. Uyezve, maitiro aMicrosoft ekuti iterative anoreva kuti Xbox One mapaipi emitambo achashanda pane akateedzana X emitambo yese. Zvichakadaro, mapfumo eDualShock 4 anowirirana nePS5 yekutamba mazita ePS4, asi mitambo yePS5 ndeyeDualSense-chete.
Zvakangodaro, panongova nemutongi mumwe chete pano ari kusundira zvechokwadi hamvuropu. Nezve izvo, iyo DualSense chishamiso.
Iwo akasarudzika maficha eese ari maviri masystem anoratidza kuti iri padyo sei iyo nyowani-chizvarwa Hardware iri kuPc yemitambo kupfuura zvataona kare.
Iyo Series X inofambiswa neyakajairwa AMD sere-musimboti Zen 2 CPU (3.8GHz yepamusoro) uye AMD yaNavi-based RDNA 2 mifananidzo chip, ine nyama ine 12 teraflops yesimba reGPU. Izvi zvakapetwa ne16GB ye RAM (GDDR6) uye tsika 1TB NVMe SSD yakagadzirirwa yakakomberedza Microsoft Velocity Architecture.
Iyo PS5 SoC, nekuenzanisa, inoshandisa imwechete 8x Zen 2 CPU setup asi yakavharwa pa3.5GHz. Iyo GPU dhizaini zvakare inoratidzira iyo Series X asi inodonhedza kune 10.28 teraflops. Uye zvakare, nepo RAM ichienderana ne Series X, iyo PS5 ine tsika 825GB SSD.
Tisati tanyura mumvura isina kugadzikana yemitengo yemafreyimu, resolution, uye nezvimwe, ngatiitei chimwe chinhu chinyatso kujekesa: ese ari maviri Xbox Series nePS5 ndidzo dzimba dzekunyaradza dzine simba kwazvo dzakambosvika pamusika. Ichokwadi zvakare kuti, pabepa, iyo Series X ine yepamusoro dzidziso yekuita kupfuura PS5. Nekudaro, kusvika parizvino mhedzisiro chaiyo inoenderana neyedu yekuyedza uye dzimwe nyanzvi zvakasanganiswa.
Gears 5Chikwereti: Xbox Game Studios
Mitambo yemapuratifomu mazhinji saDhiabhorosi Anogona Kuchemera 5 Special Edition uye Assassin's Creed Valhalla ese ari maviri anoratidza furemu reti dips pane iyo Xbox Series X. Iyo yekupedzisira inotambura nekunyanyisa screen kubvarura mune cutscenes (chigamba chazvino chakagadzirisa izvi kune vamwe, asi ini ndichiri kuchiona zvakanyanya). Pamusoro pezvo, Dhiyabhorosi Angangochema 5 ane mhando yemhando ine ray-yekutsvaga inogoneswa paPS5 nepo Series X… isinga. Mimwe mitambo, senge Kudanwa Kwebasa: Nhema Ops Hondo Yemashoko, inounza chiitiko chiri nani pane Series X sezvingatarisirwa. Ehe, kuchiri kutanga. Chechitatu-bato studio dzirikusvika pakubata neese new hardware.
Zvinhu zvakanyanyisa kunyangwe kana uchitarisa mitambo yekutanga-bato kana, mune iyo Series X, Xbox Imwe mitambo yakagadziridzwa yeChikamu X uye Series S. Izvi zvinosanganisira maGiya 5, ayo ari padhuze nekuratidzwa kuzere. yeizvo Series X inokwanisa kuita sezvaungawana izvozvi. Iyo Coaltion's gory shooter inosvika kusvika 2160p inesimba resolution resolution. Inoenderera mberi ichiwedzeredzwa nemwenje-yekutsvaga mwenje uye kuratidzwa, inoyevedza auto HDR, 60fps-yakavharwa mushandirapamwe, uye inosvika ku120fps mune vakawanda.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales Chikwereti: PlayStation Studios
Iyo PS5, zvakadaro, ine akati wandei anosarudzika ayo anoratidzira kunze kwayo Hardware. Mweya weDhimoni uye Spider-Man: Miles Morales ndiwo maviri makuru akarova. Ose ari maviri anogona kumhanya mune yechinyakare 4K mhando modhi ine ray-yekutsvaga pane yakavharwa 30fps kana mune yekuita modhi pa60fps ine ine simba furemu rate. Insomniac Mitambo zvakare ine zvigamba mune Performance RT maitiro eSpider-Man: Miles Morales. Iyo inogonesa ray-kutsvaga pa60fps, asi iine imwezve yakadzikiswa resolution uye zvishoma mu-mutambo zvinhu senge traffic uye vanofamba netsoka.
Iyo PS5 uye Series X zvese zvinopa nzira dzakawanda dzekugadzirisa marongero ako emifananidzo pane chero koni kusvika nhasi.
Zvichakadaro, rutsigiro rwe120Hz runonyanya kungobvumidzwa kune vakawanda vatambi vepamhepo yemitambo pane ese maviri maoneti. Iko kune mashoma mashoma anosarudzika, asi kazhinji nguva dzose nekutengesa-kure kwezvisarudzo zvakaderera (kusvika pasi se1080p) uye kurasikirwa kwechiedza chakawedzerwa.
Tichafanirwa kumirira kuti tione kuwanda kwesimba chairo rakavanda pasi pehood yemaitiro ese. Ichokwadi ndechekuti zvinowanzo kutora mwedzi kana isiri makore kune vekutanga-bato vanogadzira kunyatso sundira hardware kumiganhu yayo. Zvisinei, patova nemhando irikubuda kuti zvisinei kuti unosarudza danho ripi, uchafanirwa kusarudza pakati pekuita nesarudzo dzemhando yepamusoro. Ichi chave chiri musimboti wemusika wePC wemitambo kwemakore, uye zvakanaka kuti pakupedzisira uwane kumwe kuchinjika munzvimbo yeconsoon.
Mweya weDhimoni Chikwereti: PlayStation Studios
Zvisinei nekushamisika kwekutanga kukunda kwePS5 vs Xbox Series X mukuita, pane nzvimbo dzinoverengeka apo muchina weMicrosoft une ruoko rwepamusoro rwakasimba. Sezvineiwo, iyo PS5 parizvino haina kutsigira kusiyanisa mitengo yekuvandudza iyo inogona kupinda mukutamba sezvo mimwe mitambo ichiedza kusundira 120fps pazvisarudzo zvakakwirira. Izvo zvakare hazvipe yemuno rutsigiro rwe1440p kuratidza - kurova kune avo vari kutsvaga kukochekera koni kusvika kune 120fps-inogoneswa 1440p yekutarisa. Sony yasimbisa kuti rutsigiro rweVRR ruchasvika mune ramangwana firmware kugadzirisa. Izvo zvakare zvakaratidza kuti yemuno 1440p rutsigiro inogona kutevera.
Related: Yakanakisa 4K TV inobata
Ehezve, kutora mukana wechero ipi yeaya epamberi maficha iwe uchazoda iine nyowani TV seti. VRR uye 120fps zvinongowanikwa neHDMI 2.1-yakagadzirirwa maseti. Nekudaro, kana iwe uine yakati kurei 4K TV iwe unogona kunge usingave nemhanza. Kune zvakare 8K rutsigiro rwakavimbiswa kune ese maviri macompso mune ramangwana.
Chinhu chimwe chete chaunogona kunakidzwa pane chero TV kana kuongorora ndeyekukurumidza-kurodha kurodha kunopihwa neese maPS5 uye Xbox Series X. Idzo tsika SSDs ndiko kukwidziridzwa chaiko kwechipfumbamwe-chizvarwa consoles. Nguva yekutakura - kungave kuri kubhodhi kumusoro mutambo kana panguva yemutambo - zviri kukurumidza. Kuchinja kubva kuNexus kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzinouraya dzeBoletaria muMweya yeMweya kunotora masekondi. Ndizvo zvinoita zip kubva kune rimwe divi remepu kuenda kune rimwe muAassassin's Creed Valhalla.
Forza Horizon 4Chikwereti: Xbox Game Studios
Kuenda kubva pakamirira kuenda ku Gameplay pane chero koni kunokasira zvakaenzana. Inotonyanya kukurumidza kana iwe uri kutamba Mutambo Wokurumidza-unotsigirwa mutambo paXbox Series X. Iyi ficha inokutendera kuti umise mutambo wemitambo mukati kusvika kumitambo ingangosvika mishanu kamwechete uye kubaya pakati pavo usinga dzokere kumashure kuchinyorwa chemusoro.
Iko kuderera kweiyo SSDs imari yakawedzerwa pane bhiri rezvinhu. Nekudaro, panzvimbo pekuwedzera zvakanyanya mateki emitengo, Sony neMicrosoft vakadzora dura rekuchengetedza remuchina wega wega.
AAA mitambo iri kukura uye iyo Series X's yepamusoro yekuchengetedza sarudzo ndiwo muhwina muhombe weXbox players.
Iyo Xbox Series X inouya ne1TB SSD ine 802GB yenzvimbo inoshandiswa. Iyo PS5, kune rumwe rutivi, inodonha kuenda ku825GB ine 667GB chete yakasara mushure mekumisikidza. Nemimwe mitambo kubhowa ku100GB uye pamusoro, iyoyo haisi nzvimbo yakawanda yekutamba nayo.
Maitiro ese ari maviri anogona kuwedzerwa - iyo Series X nemakadhi etsika uye iyo PS5 ine M2 matanda. Nekudaro, pakuvhura, chete iyo Series X ine sarudzo dziripo kuti utenge, ne $ 219 Seagate tsvimbo kuwedzera imwe 1TB. Unogona kutamba mitambo inoenderana neshure pane ese ma consoles kuburikidza ne kunze motokari, asi kwete matsva-gen mazita. Muchokwadi, chete iyo Series X inokutendera iwe kuteedzera yakagadziriswa kana nyowani-gen mitambo kune yekunze dhiraivha.
Pakupedzisira, iyo PS5 inotsigira Wi-Fi 6, nepo Xbox Series X isingaiti. Izvi zvinoreva kuti Sony's console inowedzera ramangwana-chiratidzo chekukurumidza uye kwakadzikadzika kubatana kweWi-Fi.
Zvimiro uye software
Iyo Xbox Series X dashboard iri padyo yakafanana neiyo Xbox One's UI. Microsoft yakapa chimiro chayo chimiro chakasarudzika chakasimudza kumashure muna Nyamavhuvhu, saka hazvishamise kuona shanduko shoma kudaro. Sony, zvakadaro, yakagadzira chimiro chitsva chose. Inosvitsa litany yezvitsva, zvinyorwa zveinoverengeka, uye kutaridzika kudiki.
Nekudaro, iyo dashboard yePS5 inoita mushe mushe pekushandisa nzvimbo uye kazhinji kacho kiriniki. Izvo zvakati, iyo yakavandudzwa Control Center kusimudzira kukuru pamusoro pePS4 UI. Nokusundidzira kumwe chete kweye PlayStation bhatani pane iyo DualSense iwe unogona kuwana nekukurumidza marongero uye maficha senge mapato ehurukuro pasina kubuda mutambo wauri kutamba. Apa ndipo zvakare paunowana Zvekuita makadhi - hachizi nyowani ficha inopa mu-mutambo rubatsiro uye ruzivo paTrophy kana danho kufambira mberi. Izvo zvinokutendera iwe kusvetukira kune chaiwo matanho kana nzvimbo mune-mutambo. Tsigiro yeZviitiko zvinosiyana, asi iri sarudzo inokodzera yemazita-eparty mazita.
Iyo PS5 UI inomhanyawo mu4K HDR, isingagone kutaurwa nezveiyo 1080p Xbox dashboard. Uku sarudzo inonetsa uye iri kutemesa musoro kana uchichinja pakati pemutambo nedhibhodhi. Kumwe kunhu kune mataera, mataira, uye mamwe mataira. Iyo Xbox Series X interface ingangodaro ichinyanyisa kushingairira munzira iyo inosundira masevhisi senge Game Pass, asi yakanyanyisa kugadzirisa kupfuura iyo PS5's UI. Iko kune zvakare kunobatsira kwepasirese kutsvagisa chiitiko kana iwe ukasakwanisa kuwana yakatarwa mamiriro.
Uyu haatombove padhuze. Kuenzanisa Xbox Game Pass kune chero yeiyo Sony's PlayStation masevhisi haina-kutanga.
Kune avo vanoda zororo, Game Pass ndeyeNetflix -style sevhisi iyo inopa vashandisi mukana wekuwana toni yemitambo. Izvo zvinosanganisira ese Xbox Game Studios zita pakuvhurwa - kutanga kubva $ 9.99 pamwedzi. Iyo yepamusoro tier - Game Pass Yekupedzisira - inoenda nhanho inopfuura nekusunga mu Game Pass yePC (izere neyayo yakasarudzika raibhurari), gore rinotenderera kuenda kuApple mafoni (uye munguva pfupi iOS), EA Play, uye Xbox Live Goridhe, pamwe ne mamwe maricho (senge mwedzi weDisney Plus), ese madhora 14.99. Xbox Live Goridhe yakakosha kana iwe uchida kutamba pamhepo uye kazhinji inodhura $ 9.99 pamwedzi iri yega.
Read more: Zvese nezve Xbox Game Pass Yekupedzisira
Sony's Game Pass anokwikwidza parizvino ari PS Zvino. Kwemadhora 9.99 pamwedzi, iwe unowana raibhurari yemitambo yePlayStation kubva mhiri kwePS2, PS3, uye PS4 eras iyo inogona kuendeswa kune yako koni kana a Windows PC kuburikidza negore. Neimwe nzira, iwe unogona kurodha pasi PS4 uye PS2 mitambo (asi kwete PS3) yakanangana nePS5. Nepo mutengo wakaderera uri wakanaka, kugogodza kukuru kunopesana nePS Izvozvi ndekwekuti inogarwa nemazita ekare. Sony hitters hombe dza2020 - Dhimoni yeMweya, Iyo Yekupedzisira Kwedu: Chikamu 2, uye Ghost weTsushima - hapana kwainowanikwa.
Ikozve kune PlayStation Plus. Inoita basa rakafanana neXbox Live Gold pazvinhu zveMicrosoft nekugonesa kutamba pamhepo kwe $ 9.99 pamwedzi kana $ 59.99 kwegore rese. Zvinosuruvarisa, izvi hazviunganidzwe nePS Parizvino, saka zvinongonyara $ 20 pamwedzi kana iwe uchida zvese.
PS Plus uye PS Iye zvino zvakanaka, asi Xbox Game Pass iri pane imwe nhanho.
Zvakare senge Xbox Live Goridhe, iwe unowana mashoma "emahara" mitambo mwedzi wega nePS Plus. Nekudaro, varidzi vePS5 vanowana imwe yekuwedzera neiyo PS Plus Unganidzo - raibhurari yekuremekedza yemitambo makumi maviri kubva kuchizvarwa chePS20, kusanganisira zvekare zvechinyakare seRopaborne, Mwari weHondo, Persona 4, The Last of Us Remastered, uye nezvimwe.
Iyo bhonasi PS Plus Unganidzo inogamuchirwa kwazvo. Pane mitambo yakawanda yekuzvirasa iwe uri pakati pePS Plus uye PS Zvino, asi hapana kukwikwidza kunoenzaniswa neXbox Game Pass Ekupedzisira. Microsoft iri kupaza Sony muhondo yekunyorera. Taura zvakapusa, Game Pass ndicho chikonzero chakamanikidza kutenga muXbox ecosystem izvozvi.
Imwe neimwe koni inowedzeredzwa neyaviri yeasarudzika smartphone maapplication. Iko kune hunyanzvi zvinopfuura zviviri zviripo kune yega yega, asi izvi ndizvo zvinoshandisa zvakanakisa chero koni. Padivi rePlayStation, iwe une musimboti Playstation App uye PlayStation Remote Play. Zvichakadaro, kudivi regirini, kune iyo Xbox app uye Xbox Game Pass.
Iyo yekutanga PlayStation uye Xbox maapps zvakanyatsojeka uye zvinopa zvakafanana mashandiro. Izvi zvinosanganisira kutarisisa raibhurari yako yemutambo, marongero eprofile, kurodha kure, mameseji, nezvimwe Iyo PS App zvakare inoita kuti iwe utarise uye utenge mitambo kubva ku PlayStation Chitoro.
Iyo Xbox app yakasarudzika ficha iri tebhu yekutora iyo inogarwa nema skrini uye vhidhiyo yakatorwa pane yako koni. Izvi zvinogona kutorwa nyore nyore kune yako foni yekuchengetedza mudziyo. Iyo Xbox app zvakare inobatsira zvakanyanya panguva yekutanga setup setup - Sony inofanira kuteedzera izvi nekukasira.
Iyo Xbox app yakanyanya kusanzwisisika nekumisikidzwa kwayo kana ichienzaniswa neAppStation's shamwari yeapp, zvakadaro. Semuenzaniso, iyo yekutamba yekutamba yakavanzwa kure pasi peimwe isina mhosva tabu ine Xbox One icon pairi. Sony inoenda zvachose neimwe nzira uye inosundira kure kutamba kuita chinhu chakaparadzana. Zvese zviri zvekupokana, zvakanyanya seiyo Xbox Game Pass app. Izvi zvinoratidza zvese Game Pass mitambo paPC, koni, uye nhare. Zvichida izvi zvaida kuve yakamira yega app kutsigira kutenderera kwegore. Kana zvisiri izvo ini handina chokwadi chekuti nei izvi zvaisagona kunge zvese zvave kungowedzerwa kune hombe Xbox app seye rekuwedzera tebhu.
Midhiya, odhiyo, uye screenshots
Ose ari maPS5 uye Xbox Series X akazara nemidhiya maficha. Izvi zvinosanganisira mutambi we4K Blu-Ray kunze kwekunge iwe wasarudza iyo isina disc-isina PS5 Dhijitari Edition. Pamberi peapp, zvese zvaunoda zviri pano. Iwe uchawana Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus, YouTube, Spotify, Twitch, nezvimwe. Icho chikuru chakasarudzika ndeche HBO Max, iyo inongowanikwa chete paXbox Series X panguva yekunyora. Dolby Vision HDR yekushambadzira yakafanana Xbox-chete nyaya, asi haina kutsigirwa kwe4K Blu-Rays.
Iyo Xbox Series X inotsigirawo Google Assistant uye Amazon Alexa. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kudzora media playback, kuvhura kana kudzima iyo koni, tora skrini, uye nezvimwe kuburikidza neanopindirana smart mutauri. Iyo PS5 zvinosuruvarisa haina kana.
Izvo zvainazvo ndeye Sony's proprietary Tempest 3D AudioTech. Izvi zvakagadzirirwa kuburitsa chaiyo chinhu-yakavakirwa nzvimbo yakatenderedza ruzha pamusoro pamahedhifoni. Sony zvakare inoti Tempest 3D odhiyo inozopedzisira yauya kune vatauri veTV. Pari zvino, unogona kuiyedza kuburikidza nechero mapani emakwenzi, kana iyo tsika-inogadzirirwa PS5 Pulse 3D isina waya yemusoro.
Iyo PS5 inoshandisa yayo yega yekambani 3D odhiyo tech. Iyo Xbox Series X inosarudza kutsigirwa kweDolby Atmos.
Iyo Xbox Series X inosarudza yeDolby Atmos 3D yakatenderedza ruzha rutsigiro rwekutenderera uye 4K Blu-Ray kutamba, mitambo yakasarudzwa, pamwe neanokwikwidza DTS: X codec. Iyo PS5 inotsigira nehunyanzvi Dolby Atmos uye DTS: X, asi chete yeBlu-Rays uye 4K Blu-Rays kuburikidza neiyo optical drive.
Kana zviri zvekutorwa midhiya, iyo Xbox Series X inogona kutora zvidzitiro mu4K uye vhidhiyo pa4K HDR kwemaminitsi anosvika makumi matatu, kana zvisarudzo zvakaderera kwemaminitsi matatu. Iyo PS30 inoratidzira iyo yekutora mhando, asi iyo nguva inokwenenzverwa nekurovera makumi matanhatu maminetsi.
Virtual chaiyo ichiri kufarira niche munzvimbo yeconsoon, asi iyo PS5 inoenderana zvizere neSony's PlayStation VR headset. Kuti uishandise, iwe uchazoda iyo PSVR pachayo, iyo PS4 Kamera, uye iyo PlayStation Kamera adapter iyo inowanikwa mahara kune varidzi vePSVR varipo. Iyo nyowani PS5 kamera haienderane, asi zviripo PSVR zvishongedzo senge iyo PlayStation Move remotes uye iyo Aim Controller ichashanda zvakanaka. Kune mimwe mitambo mikuru inowanikwa papuratifomu, asi heino tariro Sony yaburitsa nyowani PlayStation VR headset munguva pfupi. Zvimwe zvezvipenga pano zvave zvinoenderana nehunyanzvi hwapfuura makore gumi.
Microsoft yakaratidza zero zero yekuunza zviitiko zveVR kumakoni ayo kusvika parizvino. Usabatise tariro yakawandisa ye Xbox VR headset chero nguva munguva pfupi.
Great consoles inoda mitambo mikuru. Iyo PS5 uye Xbox Series X zvine zvakawanda zvacho. Nekudaro, pakuvhura, imwe chete iri kuendesa zvakasarudzika zviitiko zvausingakwanise kuwana kumwe kunhu - uye ndiyo Sony's console.
Astro's PlayroomCredit: PlayStation Studios
Mutsara wekuburitswa kwePS5 nharo ndeimwe yemaraibhurari emitambo akanakisa kwezvizvarwa zvakati kubva kukambani isina kunzi Nintendo. Mweya weDhimoni inoyeuchidza zvine mbiri zvehutsinye hwePS3 hunyanzvi. Astro's Playroom (yakasunganidzwa mahara neese maPS5) ndiwo mutambo wakanyanya weNintendo uyo usina kugadzirwa naNintendo. Ichowo chiratidziro chakakwana cheiyo DualSense. Kune zvakare Spider-Man: Miles Morales, ipfupi asi inotapira kutenderera kubva kuMarvel's Spider-Man paPS4, hunyanzvi hwakavhurika-wepasirose Iyo isina nzira, inoshamisa uye inotapukira Bugsnax, uye kudzoka kweSony's de facto mascot muSackboy: Chiitiko Chikuru.
Read more: Mitambo yakanakisa yePS5 | Iyo yakanakisa Xbox Series X / S mitambo
Zvakare, iyo Xbox Series X ine imwe yeasina kusimba mutsara-kumusoro mune yazvino ndangariro. Nehurombo, kunonoka kusati kwaitika kwechirongwa chakarongwa chekutanga Halo Infinite yakasiya gomba hombe, risingazadzike muTravel X yekuburitsa raibhurari. Chinhu chepedyo kune mutsva mutsva mutambo ndeweYakuza: Senge Dhiragoni. Nekudaro, izvozvowo zvinopedzisira zvaita nzira yayo kune mamwe mapuratifomu mu2021.
Pane kudaro, Microsoft iri kuvimba nemitambo yayo yakateedzana X / S kubva kuXbox One chizvarwa kuti ubate pfungwa dzako. Kana usati watamba zvaunoda zveGears 5, Forza Horizon 4, Gungwa reMbavha, kana Halo 5: Vachengeti zvakadaro, iwe unenge uine hupfumi hwemazita epamusoro ekunakidzwa. Izvi zvinonyanya kuitika kune akapara pasi peGears 5 inova yekuratidzira bravura kwesimba reX X. Kana iwe wakambotamba mitambo iyi zvisati zvaitika, zvakadaro, iwe unenge uchitarisa kune epamusoro-soro mitambo yechitatu senge Assassin's Creed Valhalla uye Call of Duty: Black Ops Cold War kune yako nyowani AAA mafaro -mitambo inowanikwawo paPS5.
Halo: Iyo Master Chief UnganidzoCredit: Xbox Game Studios
Nekutenda, zvinoita sekunge zvakanyanya kuti Microsoft hombe nhema bhokisi richakurumidza kuzokwikwidza ne PlayStation pane yega yekumberi. Iyo hofori yeRedmond yakakwenenzvera boka revadzidzi vane tarenda mumakore mashoma apfuura. Izvi zvinosanganisira kuwanikwa kwekuvhunduka kweThe Elder Mipumburu uye Mugadziri wemugadziri, Bethesda Game Studios, pamwe nevamwe vese vemhuri yeZeniMax. Sony's PlayStation Studios yakaenzana yakazara netarenda, neiyo Yekupedzisira Kwedu uye Unchched mugadziri Naughty Imbwa zvine hungwaru iyo dombo mukorona yayo.
Iyo PS5 ine zvimwe zvitsva uye zvinonakidza zvinosarudzika izvozvi uye kuuya munguva pfupi iri kutevera.
Iyo ramangwana ramangwana rinotaridzika kupenya zvishoma kune vatambi vePlayStation, ine Horizon Yakarambidzwa West, Ratchet uye Clank: Rift Kuparadzana, Deathloop, iyo inotevera kuna 2018 Mwari weHondo, Ghostwire: Tokyo, Kudzoka, Disco Elysium: Yekupedzisira Kucheka, Kurasika, uye zvimwe , dzese dzinovhura seyekunyaradza kweconsoon kana yakasarudzika yakasarudzika paPS5. Xbox Series X varidzi vanofanirwa kutarisa kumberi kupfuura 2021 kune vanofarira veSaga yaSaga: Hellblade 2, Everwild, Avowed, iyo Yakakwana Rima reboot, uye iyo yakamirirwa kwenguva refu ngano. Pane zvimwe zvakakosha munzira kunyange. Izvi zvinosanganisira Series X / S yakagadziridzwa Psychonauts 2 uye juggernaut iri Halo Infinite. Izvi zvese zvakasimbiswa pakuvhurwa kwe2021.
Ehezve, iyi kurwa-kune mativi kurwa kunoshanda chete kana iwe uchifarira yakasarudzika mitambo. Kana iwe uine hanya zvakanyanya nezve hitters hombe kubva kune yechitatu-bato vaparidzi uye vanogadzira, iko kukwezva kweXbox Game Pass kwakasimba kwazvo. Parizvino, raibhurari yeMutambo Pass yakarongedzwa nemitambo inoshamisa - kubva kune dzakavanzika indie matombo kune blockbusters - ayo akahwanda hupfumi hwemhando dzakasiyana. Tarisa uone izere runyorwa pawebhusaiti yeMicrosoft pano.
Kutenda kune Game Pass, Series X iri nani koni yemazhinji-chikuva uye retro yemitambo.
Iko hakuna zvakare kupokana kuti iyo Xbox ichiri makore egore pamberi peiyo PlayStation nerutsigiro rwekudzokera kumashure kuenderana. Iyo PS5 inozoona Sony ichimbundira chimiro ne padyo-yakazara rutsigiro rayo hombe raibhurari yePS4, asi iyo Series X inogona kudzokera kumashure mazera matatu akazara uye kutamba yekutanga Xbox mitambo. Kwete izvozvo chete, asi iyo Series X inoshandisa auto HDR mhedzisiro kune yega yega inodzokera-inoenderana mutambo.
Nekudaro, zvakanaka kuona ese mapuratifomu achisundira asina kuvhurika furemu zviyero kunyangwe mumazita asingasimudzirwe kusvika ku60fps pazvinogoneka
CPU 8x macores @ 3.5GHz w / SMT
Tsika Zen 2 CPU
7nm 8x cores @ 3.8GHz (3.66GHz w / SMT) Tsika Zen 2 CPU
GPU 10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23GHz Tsika RDNA 2 GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825GHz Tsika RDNA 2 GPU
chengetedzo 825GB Tsika NVMe SSD 1TB Tsika NVMe SSD
Kugadziriswa uye furemu rate 4K (2160p) kusvika 120fps 4K (2160p) kusvika 120fps
Optical dhisiki dhiraivha 4K UHD Blu-Ray drive (yakajairwa PS5 chete) 4K UHD Blu-Ray dhiraivha
Audio "Dutu guru" 3D AudioTech
Kusvika ku7.1 L-PCM
Dolby Atmos / DTS: X (Blu-ray chete) Dolby Digital 5.1
Dolby Yechokwadi HD ine Atmos
Wireless 802.11ac mbiri bhendi
miganhu Yakajairwa: 390mm x 104mm x 260mm
Dhijitari Dhizaini: 390mm x 92mm x 260mm
Mutengo uye mazuva ekuburitsa
Dreamcast 5 - $ 499 / £ 449 / € 499
Xbox Series X - $ 499 / £ 449 / € 499
Iyo Xbox Series X yakarova musika wepasi rose kutanga munaNovember 10, 2020, mutengo pa $ 499. Uyu ndiwo mutengo mumwe chete neiyo yekutanga Xbox Rimwe yakavhurwa kare muna 2013, pamwe neyakagadziridzwa Xbox One X iyo yakasvika mukupera kwa2017.
Mutambo we PlayStation 5 wakaburitswa wakauya mazuva mashoma gare gare munaNovember 12, 2020, muNorth America uye mimwe misika yakasarudzwa. Yakasvika gare gare ichiri yepasi rose munaNovember 19. Iyo PS5 inowirirana neiyo Xbox Series X's $ 499 mutengo weti. Izvi zvinomiririra kukwira kwemadhora zana pamusoro pePS100 muna4 uye iyo PS2013 Pro mukupera kwa4, ese ari maviri akatanga kutengesa $ 2016.
Kana iwe uchikwanisa mudumbu kubayira disc dhiraivha ipapo iyo PS5 Dhijitari Dhizaina ine akafanana maficha seyakajairwa PlayStation 5 uye inotengwa pamadhora 399. Mamiriro ezvinhu akafanana neaya $ 299 Xbox akateedzana s, kunyange hazvo Microsoft yedhijitari-chete koni inodonha ichidzokera kumberi pane specs. Buda kuongorora kwedu kune zvimwe pane iyo Series S.
Read more: PS5 Dhijitari vs Xbox Series S - ndeipi bhajeti koniyo ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kwauri?
Ukatarisa chete kune iwo mafekitori, iwe unoregererwa nekufunga kuti kuenzanisa iyo PS5 uye Xbox Series X inzvimbo inonetsa. Yakatorerwa pasi kune izvo chete zvakakosha, pane zvimwe zvinobatanidza Sony neMicrosoft yepfumbamwe-gen duo pane kuzvipatsanura. Ivo vaviri vanozvirumbidza yakakwana mbishi CPU neGPU simba rekusundira mamwe mafuremu uye zvisarudzo zvakakwirira kupfuura zvatakaona isu tisingatombodi chero inodzikama-yakabuda PC yemitambo. Ivo vaviri vanoratidzira kutsva-nekukurumidza tsika SSD dhiraivha iyo inoparadza iyo pfungwa yenguva yekutakura uye kudzikisira kumirira pakati pemamenyu anonetesa uye mutambo wemitambo kumasekondi mashoma.
Pane kudaro, musiyano mukuru pakati peaya mabhehemoti uri mune avo vanokwikwidza uzivi.
Buda: Sei uye kupi kwekutengesera muPS4 yako yePS5
Iyo PS5 chiyeuchidzo chekunyaradza macircuit uye pfungwa yekuti kusvetuka kwerudzi kunofanirwa kuendesa pane wow chinhu. Izvi zvinoratidzira mukushamisika kwayo dhizaini iyo nyika iri kure neiyo angular PS4. Kune zvekare kunakidzwa kwaunowana kubva mukuyedza iyo DualSense kekutanga uye iwo anopenya, zvigadzirwa zvehardware-zvichisunda izvo zvinowanikwa kubva pazuva rekutanga. Izvo zvirimo mune zvidiki diki, senge neyakagadziridzwa UI nemaapp. Sony's console inoda kukuratidza chimwe chinhu chitsva.
Iyo Xbox Series X inotenderera munzira yakazara yakatarisana. Iko kushinga, asi zvakare understated matte nhema cuboid. Iyo koni yakavhurwa nemitambo mishoma kwazvo inouya chero padhuze nekuratidza simba rayo rinopenga, ndoda chero chinhu chausingakwanise kusangana nacho kumwe kunhu. Haisi chete mitambo futi. Iyo dashibhodhi uye inodzora (kunyanya kana iwe uri kushandisa yekare Xbox Rimwe pad) inounza manzwiro ekuda deu vu kune chero achangopfuura Xbox mushandisi. Iyo Series X yakasindimara inoramba kutamba mutambo wechizvarwa. Izvo zvainazvo, zvakadaro, chiratidzo.
Iyo PS4 / Xbox Imwe nguva yaive yakarebesa muvhidhiyo mutambo nhoroondo. Iine ramangwana-proofing mukati memachina ese ari maviri, zvinoita kunge zvisingadziviriki kuti chizvarwa chePS5 / XSX chingangoenderana kana kutodarika makore masere marefu. Munguva iyoyo, chimiro chenzvimbo yekutamba chinotarisirwa kuita morph se gore mitambo, masevhisi ekubhadhara, uye rutsigiro rwechikuva-chikuva dzinove dzakakurumbira. Parizvino, iyo Xbox iri kutungamira pane ese matatu emativi aya neimwe margin. Sony yaigona kusimudza mutambo wayo, asi kana iwe uchinyanya kufarira kuisa mari pa $ 500 + mushure mekunyorera pane yakagadzikana, ine chinzvimbo ecosystem pamusoro pe (inobvumidzwa inokwezva) chishuwo chekugutsikana nekukasira, iyo Xbox Series X ndiyo nzira yekuenda. Ehezve, kana iwe uri kutsvaga kusevha kunyange yakawanda mari uye usine hanya nekurasikirwa neimwe yekugadzirisa grunt uye dhisiki dhiraivha, ungangoda kufunga nezve Xbox Series S pachinzvimbo.
Nezvese zvataurwa, iyo PS5 inogona kunge iri tariro inokwezva izvozvi. Nepo mhuri iri kukura yeXbox Game Studios ichikwanisa kutanga mutsva mutsva wemazuva ano weiyo green brand, Sony sisitimu yevagadziri yakaratidza chizvarwa chayo mumakore mashoma apfuura. Kanda mune chishamiso cheDualSense controller uye nesarudzo yepamusoro yemitambo kubva kune vanogadzira maJapan - inoramba yakasimba nzvimbo yeiyo Xbox brand - uye pane zvikonzero zvakawanda zvekutora PlayStation 5.
Kutenga chero koni mumwedzi mishoma inotevera kuteedzera kubhejera. Iyo PS5 inoita kunge inokosheswa yeakakura epfupi-epamberi kubudirira mushure mekuve zviri pamutemo chinotengesa nekukurumidza kupfuura zvese-nguva. Ndingangodaro ndinonyepa kana ndikati handina kunakidzwa nekutamba mitambo paPS5 kupfuura zvandinoita neXbox Series X. Iyo DualSense inonyatsoita mutsauko. Asi, ini zvakare handigoni kuramba kuti kana iwe usina hanya nemitambo mitsva yakasarudzika (a guru if) uye usati uine PC inokwanisa yemitambo (uko angangoita ese eXbox anosarudzika anotamba zvizere), iyo Series X inomiririra kukosha kunoshamisa padivi pekunyoreswa kweXbox Game Pass.
Chinokosha ndechekuti iyo PS5 uye Xbox Series X inyaradzo dzinoshamisa dzinoburitsa kugona. Zvisinei nezano rekusiyanisa, iwo maviri akaenzana laser-yakanangana nekugadzira mutambo wepamhepo zvakanakisa zvati zvave.
Iyo PS5 ndiyo yazvino PlayStation imba koni kubva kuna Sony. Iyo inoratidzira yakanyanya-kutsanya tsika SSD uye yakagadziriswazve DualSense controller ine epamberi haptics uye inogadziriswa inogadzirisa.
$ 499 ku Amazon
Iyo Xbox Series X ndeye Microsoft yazvino yakasarudzika mitambo yemitambo iri kutsvaga kupomhodza kukwikwidza muchipfumbamwe chizvarwa chekunyaradza neropa-kumucheto tekinoroji uye inoshamisa kukosha kweXbox Game Pass.